Induction Heating dhamaadka kuleylka badalaya by kuleylka haynta RF
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / Induction Kuleylka dhamaadka beddelka beddelayaha
Induction Isgoysyada dhammaadka qalabka wax lagu dhejiyo
Category: Kuleylka kuleylka Tags: badalka catalytic, kuleyliyaha badalaya kuleylka, kuleyliyaha badalaya catalytic, dhamaadka kuleylka kuleylka, Nidaamka kuleyliyaha badalaha RF
Induction Isgoysyada dhamaadka qalabka wax lagu dhejiyo ee loo yaqaan "Kumbuyuutarka Qalabka" ee Kumbuyuutarka
Ujeedo Kuleylka dhamaadka nidaamka qiijiye gawaarida xamuulka qaada. Shirka waa in lagu hayaa heerkulka bartilmaameedka 200 saacadood, halka goluhu gariir yahay si loo tijaabiyo xoogga alxanka.
Heerkulka 842 - 932 ºF (450-500 ºC)
Qalabka DW-HF-15kW, nidaamka kuleylinta kuleylka, oo lagu qalabeeyay madaxa shaqada fog oo ay ku jiraan laba 5 μF capacitors wadar ahaan 10 μF iyo isku xirnaanta kuleylka kuleyliyaha loogu talagalay lana sameeyay
gaar ahaan codsigan.
Geedi socod / Sheeko Xirmo af-wareeg ah oo isku-dhafan oo qaab-isku-dhafan leh ayaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo dhammaadka nidaamka qiiqa inta lagu jiro baaritaanka xoogga alxanka. Waxay qaadataa ugu yaraan 5 daqiiqo in la gaaro heerkulka bartilmaameedka
inta udhaxeysa 842 - 932 ºF (450-500 ºC). Heer-kulkaan ayaa markaa la hayaa 200 saacadood iyadoo nidaamku gariir yahay si loo ekeysiiyo xaaladaha wadista. Kadib alxanka ayaa laga baarayaa dildilaaca.
Natiijooyinka / Faa'iidooyinka Waxsoosaarka saxda ah ee korontada ayaa haysa heerkulka la doonayo dulqaad adag.
Induction Iskudhinta Dhammaadka Rod, Qaanadaha, Boosaha
Nitinol Dejinta kuleylka
kululaynta laaluushka ayaa ka dhashay tuubbo bir ah